Xil Wareejin ka dhacday Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Xil Wareejin ka dhacday Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka
Xil Wareejin ka dhacday Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka
Muqdisho:Xaflad xilwareejin ah oo ay kasoo qaybgleen xubna ka socda labada Gole ee Dawladda, hawlwadeenno ka tirsan xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo Xafiisyada Hanti Dhawrka iyo Xisaabiyaha Guud, ayna xilal ku kala wareegayeen Wasiirkii hore ee Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka, Mudane Da’uud Maxamed Cumar iyo K/Xigeenkiisa Mudane Maxamed Cumar Geedi iyo Wasiirka cusub ee Wasaaradda Mudane Maxamed Mukhtaar iyo K/Xigeenkiisa Mudane Maxamed Axmed Kulan ayaa maanta lagu qabtay Xarunta Wasaaradda.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Mudane Dr. Faarax Cabdi Xasan oo munaasabadda furay ayaa si kooban u sheegay dadaalkii iyo halgankii loo soo maray si ay Wasaraddu u gaarto meesha haatan mareyso. Dr. Faarax ayaa kadib hadalka siiyay labada Wasiir ee xilka wareejinayay.
Wasiirka iyo Wasiir K/Xigeenka shaqada ka tagaya Mudane Daa’uud Maxamed iyo Mudane Maxamed Cumar Geedi ayaa kusoo dhaweeyay Wasiirka cusub gacmo furan iyaga oo u rajeeyay in uu sii dardargeliyo hawlo badan oo haatan u baahan in la dhameystiro sida shuruuc ay qoran oo u baahan in Golah Wasiirada la horgeeyo.
Mudane Da’uud ayaa yiri “Waxaan u rajeynayaa Wasiirka cusub in Alle u fududeeyo hawsha loo igmaday. Shaqo walba oo ay Wasaaraddu qabatay waxaa sharafteeda iska leh shaqaalaha iyo khubarada ila shaqeeyay mudadii aan Wasiirka ka ahaa. Waxaan shaqaalaha iyo khubarada kaleba ka rajeynayaa in sidii ay iila shaqeeyeen ay u garab istaagaan Wasiirka cusub.”
Wasiirka xilka la wareegaya Mudane Maxamed Mukhtaar ayaa isagana bogaadiyay Wasiirka tagaya hawshii cusleyd ee uu qabtay isaga oo ku tilmaamay inuu yahay masuul hawlkar ahaa oo aan ku qancin wax ka yar Soomaalinimada.
“Mudane Da’uud hawsha uu qabtay aad baan ugu amaanayaa. Waxaan sidoo kale ballan qaadayaa inaan kordhiyo oo aan kobciyo tirada iyo tayada shaqaalaha aan hadda jooga, wixii xuquuq ah oo ka maqanna aan usoo dhiciyo.” Ayuu yiri Wasiir Maxamed Mukhtaar oo laga bilaabo maanta si rasmi ah shaqadiisa u guda galay.
Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka waxay Mudane Daa’uud Maxamed Cumar iyo Mudane Maxamed Cumar Geedi u rajeynaysaa mustaqbal wanaagsan iyo nolol wacan.
Previous articleSidee Ayay Noqon Lahayd Nolosha EVC La’aantiis?
Next articleHay’adda Nabad sugidda Soomaaliya oo si cusub u wajahaysa xaqiijinta Amniga Muqdisho